Everything will be done to make you feel better again. tapaaylaay neeko paarnako neemeetta puraa prayaas gareenecha तपाइलाई निको पार्नको निमित्त पुरा प्रयास गरिने छ
You are only slightly wounded. tapaay aleekaatee matraa gaaytey hunu va cha तपाई अलिकति मात्र घाइते हुनु भा छ
You will soon be up again. tapaay chaado ney utnu huncha तपाई चाँडो नै उठ्नु हुन्छ
Your condition is serious, but you will get better. tapaayko steetee gambeer cha, taaraa tapaay cheetey neeko hunuhuncha तपाईको स्थिति गम्भीर छ, तर तपाई छिटै निको हुनुहुन्छ
You will get better if you let us take care of you. edee hameelaaee tapaayle aafno herbeechaar gaarnaa deenu vo vaane tapaay cheetey neeko hunuhuncha यदि हामीलाई तपाईले आफ्नो हेरविचार गर्न दिनु भो भने तपाई छिटै निको हुनुहुन्छ
You are seriously hurt. tapaay gamveer roopama gaytey hunu vaa cha तपाई गम्भीर रुपमा घाइते हुनु भा छ
You are seriously ill. tapaay gambeer roopama beeraamee parnu vaa cha तपाई गम्भीर रुपमा बिरामी पर्नु भा छ
It will probably takealong time for you to get better. tapaaylaay neeko hunama shaayed deray samaya laagla तपाईलाई निको हुनमा शायद धेरै समय लाग्ला
The surgery was successful. tapaayko serjeree safal vaayo तपाईको सर्जरी सफल भयो
We were able to help you. hamee tapaaylaay sahaayetaa deenamaa safal vaayo हामी तपाईलाई सहायता दिनमा सफल भयौ
We had to remove this. hameelaaee yo neekaalnu paryo हामीलाई यो निकाल्नु पर्यो
We tried, but we could not save this. hameele koshesh gaareu tara eslaaee bachaaun sakenaou हामीले कोशिश गर्यौ तर यसलाई बचाउन सकेनौ
You were hurt very badly. tapaay naaramraaree saanga gaayte hunu vaa teeyo तपाई नराम्ररी संग घाइते हुनु भा थियो
You will be fine. tapaaylaay teek huncha तपाईलाई ठीक हुन्छ
You will need time to heal. tapaaylaay neeko huna somaaye laaglaa तपाईलाई निको हुन समय लाग्ला
We will arrange for your transport back to your country. hamee tapaaylaay aafno desh faarkeene vyavastaa garee deenchu हामी तपाईलाई आफ्नो देश फर्किने व्यवस्था गरी दिन्छौ
We will send you to another place. tapaaylaay aarko tauma pataau chu तपाईलाई अर्को ठाउँमा पठाऊ छौ
You need more care. tapaaylaay badee herneechaarko zarurat cha तपाईलाई बढी हेरविचारको जरुरत छ
You will return to your Unit when you are better. tapaay neeko vaaye paachee aafno yuneetma farkeenu huncha तपाई निको भए पछी आफ्नो युनिटमा फर्किनु हुन्छ
I will be back soon. maa cheetaay aauchu म छिटै आउछु
I will check back later to see how you are doing. maa paachee ayeraa, tapaayko praagaatee jaachchu म पछी आएर, तपाईको प्रगति जांच्छु
Return tomorrow so we can be sure you get better. volee faarkeenu holaa, taakee hamee neeshcheet huna sakaou kee tapaaylaay ramro hundeycha भोलि फर्किनु होला, ताकि हामी निश्चित हुन सकौ कि तपाईलाई राम्रो हुँदैछ
Return in one week so we can be sure you get better. ek haftaama faarkeenu hola, taakee hamee neeshcheet huna sakaou kee tapaaylaay raamro hundaeycha एक हफ्तामा फर्किनु होला, ताकी हामी निश्चित हुन सकौ कि तपाईलाई राम्रो हुँदैछ